सावधान ! नङ टाेक्ने बानी छ, बदल्नुहाेस् - TV Annapurna
सावधान ! नङ टाेक्ने बानी छ, बदल्नुहाेस्
August 4, 2017 August 4, 2017 Annapurna TV
लन्डन | सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’
धेरै मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ। नङ कीटाणूको भण्डार भन्ने थाहा पाइसकेपछि अझै नङ टोक्नु हुन्छ? बीबीसी
भरतपुर १९ को मतगणना सुरू हुँदै
काँग्रेसकाे दाेस्राे वरियताका नेता राहुल गान्धी कुटिए
December 11, 2017 Annapurna TV 0
बलिउड हुँदै हलिउडको यात्रा थालेकी भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपडा यस बर्ष २०१७ को एसियाकै सर्वाधिक सेक्सी...
December 09, 2017 TV-Annapurna 0
के तपाईले रिचार्ज गरेको कार्ड र सुर्तीको खोल फाल्ने गर्नुभएको छ ? हेर्नुहोस् जम्मा गरे अब पैसा पाईने
काठमाडौँ। मोबाइल रिचार्ज गरेको कार्ड र सुर्तीको खोल फाल्ने गर्नुभएको छ भने अब नफाल्नुहोस् । जम्मा...
December 09, 2017 Annapurna TV 0
चुनावी समाचारले पट्यार लागेको छ ? हेर्नुहोस गरिमामा हट अवतार
युरोपका नेपाली व्यापारीसँग विवाह गरेकी नायिका गरिमा पन्त पछिल्लो समय निकै परिवर्तन हुदै गएकी छन् ।...
तपाईलाई टाउको दुख्ने समस्याले सताएको छ ? करेलाको पात खानुहोस् ठिक हुन्छ
खाँदा तितो भए पनि करेलाका धेरै फाइदा छन् । करेलाले कतिपय रोगलाई निको बनाउन पनि सहयोग...
तपाईको शरीरका ७ ठाउँमा कोठी छ ? यस्ता छन् कोठी अनुसारका विशेषता
१. कन्चटमा भएको कोठी भएमा कन्चटमा कोठी हुनेहरुलाई धेरै घुम्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यो अवसर...
चिसो मौषम बढिसक्यो बच्चलाई यसरी जोगाउनुहोस् ! डाक्टरका १० सुझाव
चिसो मौसम सुरु भई सकेको छ । यो मौसम सुरु हुनासाथ बालबालिकामा विभिन्न संक्रमण र समस्याले...
गुगल सर्चबाट ७५ प्रतिशत मानिसले स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने
गुगल सर्च जनस्वास्थ्यको लागि बहुपयोगी भएको एक अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ । बेलायतमा गरिएको एउटा सर्वेक्षण...
तपाईको धेरै सुत्ने बानी छ ? सावधान ! यस्ता १० खतरनाक रोगको सामना गर्नुपर्ला
तपाईको विहान अबेर सम्म सुत्ने बानी छ ? यदि छ भने आजै परिवर्तन हुनुहोस् है ।...
१३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई फेसबुकले ल्यायो यस्तोे खुसीको खबर
१३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गरी फेसबुकले च्याट एप्लिकेशन भित्राएको छ । यसबाट १३ वर्ष...
दाँत ब्रस गर्न अल्छि लाग्छ ? विचार गर्नुहोस् है यस्तो समस्या देखिन सक्छ
आजभोलि धेरै मानिसको दैनिकी दाँत ब्रस गरेर सुरु हुन्छ । तर, नेपालका ग्रामीण भेगका कतिपय मानिसमा...
कब्जियत छ? नआत्तिनुहोस् एकपटक यसो गर्नुहोस् त
कहिलेकाहीँ कब्जियत जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ यो स्वभाविक नै हो तर जसलाई नियमित रुपमा कब्जियत...
तपाईमा यी चार रोगका लक्षण त देखिएका छैनन् ? कानले नै दिन्छ यस्ता संकेत
हाम्रो शरीरमा कतिपय यस्ता अंग हुन्छन्, जसले बिरामी हुनुपूर्व नै रोगबारे संकेत दिन्छन् । कान पनि...
कालो दाग भएको केरा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
अधिकांश मानिसले दिनहुँजसो केरा सेवन गरिरहेका हुन्छन् । बजारबाट केरा किनेर ल्याँउदा होस् वा घरमा पाकेको...
महिनावारीको समयमा यी पाँच कुरा नखानुहोस्
महिनावारीको समय महिलाहरुलाई अनेक थरीका शारीरिक र मानसिक समस्याबाट गुज्रनुपर्छ । मांसपेशिमा तनाव, दुखाई, चक्कर आउनु,...
मानव जीवनका लागि सेक्स अर्थात यौन महत्वपूर्ण कुरा हो । संसारमा सबै भन्दा धेरै लुकाइएको र...
जब मानिस आफुले आफुुलाई सम्हाल्न सक्दैन अन्त्यमा आत्महत्याको बाटो रोज्दछ । हामीलाई लाग्छ आत्महत्या जीवनबाट अभाव...
पानी कति पिउने, कसरी पिउने र कहिले पिउने ? आफ्नै नियम छ
पानी कति पिउने, कसरी पिउने र कहिले पिउने ? यसबारे मानिसमा ठूलो अन्योल छ । धेरै...
कसैले प्रेम गरेको छ वा छैन यसरी थाहा पाइन्छ
मन सबैको हुन्छ र प्रेम सबैले गर्छन् । आफुलाई मन परेको केटा वा केटीलाई पाउन सबै...
December 03, 2017 Annapurna TV 0
तपाई ३५ वर्ष पुग्नुभयो ? नियमित यौन सम्पर्क राख्नुहोस्, यति धेरै फाईदा छन्
तपाई हामीमध्ये धेरै जनालाई थाहा भएकै कुरा हो ढल्किदो उमेरसँगै दिमागका कोषहरु पनि निष्क्रिय हुँदै र...
एक्कासी तपाईको फोनमा तल दिईएका जस्तै समस्या देखिए ? फ्रिजमा राख्नुहोस् सब ठिक हुन्छ
स्मार्टफोनमा सानो सानो समस्याले पनि कहिलेकाही हामीलाई दुख दिईरहेको हुन्छ । कहिलेकाही मोबाइलमा केहि समस्या आउन...
यो हो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र बढी मेगापिकसेल रिजोलेसन भएको क्यामेरा !
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र सर्बैभन्दा धेरै मेगापिकसेल भएको क्यामरा निर्णण भईरहेको समाचारमा बताईएको छ । अमेरिकी...